Chirwere chisingazivikanwe chopedza zvipfuyo - The Zimbabwean
Chirwere chisingazivikanwe chopedza zvipfuyo
Zvipfuyo kuGutu South zvinonzi zviri kufa nekuda kwechirwere chisingazivikanwe, uye vagari venzvimbo iyi vanoti vave kutya kuti chirwere ichi chingango pararira kune dzimwe nzvimbo.
Zvipfuyo zvinosanganisira mombe nembudzi ndizvo zviri kunyanya kubatwa nechirwere ichi chinonzi chiri kuuraya chiriporipotyo.
Mhuri dzinogara muWard 13 ne14 dzinoti dzafirwa nemombe dzinokwana nomwe nembudzi dzine chitsama mumwedzi wapfuura.
Achitaura nemutori wenhau weZimbabwean svondo rapfuura, Savior Mazuru ane makore makumi mashanu nematanhatu ekuberekwa akati vagari venzvimbo iyi vari kukushushi-kana nezvirwere zvinokonzerwa nezvishambwe zvakabata zvipfuyo zvizhinji.
“Pari zvino, tiri kutambudzika nekurapisa zvipfuyo zvedu kuzvirwere zviri kukonzerwa nezvishambwe uye zvipfuyo zvizhinji zvakabatwa nezvirwere izvi. Chirwere ichi chatisiri kuziva chinouraya chiriporipotyo uye chiri kutipedzera mombe dzedu, dzagara dziri shoma.
Ndakaona mombe mbiri dzichifa zvisina tsarukano,” akadaro Mazuru. Mazuru akati mombe dziri kufa idzi dzinotanga dzazeya mushure dzowira pasi nekufa.
“Mhuri zhinji dzekuno varombo uye vazhinji vavo havakwanisi kurega nyama ichiora zvinoita kuti nyama yemombe idzi itengeswe nekukasika nemutengo uri pasi kune vamwe vagari venzvimbo ino,” akadaro Mazuru. Achimiririra vanoona nezvetsika nemagariro evanhu akanaka, Arnold Tifugudza akati zvakakosha kuti veruzhinji kunyanya kumaruwa vazive kukosha kwekusadya nyama yezvipfuyo zvinenge zvafa zvisina tsarukano maringe nehutano hwavo.
“Zvimwe zvezvirwere zvinouraya zvipfuyo zvinokuvadza hutano hwevanhu, nekudaro nyama yezvipfuyo izvi inofanira kuraswa kure nevanhu kuitira kudzivirira kupararira kwezvirwere izvi,” akataura Mazuru.
Mutori wenhau akakundikana kuwana mashoko kubva kuna Mudhefe anova mukuru mukuru anoona nezvekurima munzvimbo iyi ari mubazi reAgritex.
Mbozhanhare yemukuru mukuru anoona nezvekurapwa kwezvipfuyo munyika mubazi rehurumende, Stuart Hargreaves yanga ichingorira zvisina mhinduro kusvika panguva yekunyorwa kwebepanhau.